iOS 11 ichatumira emoji ine hupenyu maererano nechiso chako kumeso | IPhone nhau
iOS 11 ichatumira emoji ine hupenyu maererano nechiso chako
Apple yagara iri imwe yevanosimudzira emoji, iwo ma icon anozivikanwa ayo isu tese atinoshandisa kwete chete mukutumira meseji kwedu asi kunyangwe mumaemail nezvose zvatingavaise. IOS 11 ichaenderera mberi, uye zvinoenderana nezvakaburitswa vhezheni yeGolden Master vhezheni pamberi penguva tinogona kutumira 3D animated emoji iyo inoratidza kuratidzwa kwechiso chedu.
Izvi zvaunopinda mumusoro wemusoro ndeimwe mimwe mienzaniso yezvingaitwe neanopisa emoji. Iyo iPhone inobata kuratidza kwedu uye emoji inozviratidza, tichitaura zvirinani kupfuura nakare kose zvatinoda kutaura mumashoko. Catalog ye emoji iyo yatinogona kugadzirisa ichave yakafara uye isu tinokuratidza pazasi.
Mhuka dzinoyevedza senge iyo nyati, mhuka dzakajairika senge tsuro, nguruve, panda bere, tsoko, huku, imbwa, katsi uye gava, sainzi ngano vanhu senge robhoti kana mutorwa, uyezve, tsvina ine maziso. Dzese dzichave dziripo kwatiri kuti titumire kuburikidza neMessage kune mumwe munhu nematauriro edu. Iyo yekumberi kamera uye yeApple yekucherechedzwa kwechiso system ichashanda kutora iko kuratidzwa kwechiso chedu uye zvichienderana nazvo, iwe uchagadzirisa iyo emoji kuchangamuka. Matauriro avanokwanisa kutora akasiyana kwazvo, kubva pakufamba ne tsiye, maziso, maziso, muromo uye matama kusvika kune zvinyoro nyoro sekufamba kwemiromo.
Iwo anozove mashandiro anongowanikwa chete eMessage muchikamu chekutanga, kunyangwe zvingave izvo Apple ichibvumidza mameseji ekunyorera kushandisa aya ehupenyu emoji. Izvo zvinoita senge zvine chokwadi ndezvekuti nekuda kwezvinhu zvehardware chete iyo iPhone 8 ndiyo ichakwanisa kushandisa aya ehupenyu emoji, sezvo kitambo chese chekutarisa kumeso icho chete ichi chitsva modhi chinotakura chichava chakakosha, nekuti iyo iPhone 7s uye 7s Plus ichaenderera ichishandisa Kubata ID senzira yekuchengetedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11 ichatumira emoji ine hupenyu maererano nechiso chako
Kutenda nenhau Luis. Nezve rini iOS 11 inofanirwa kuburitswa kuruzhinji?
Iyo Goridhe Master mangwana Chipiri, uye yekupedzisira vhezheni gare gare, asi ndepapi chaizvo pandanga ndisingakwanise kukuudza.
Ndatenda zvikuru nemhinduro 😉
iPhone X, iPhone 8 uye iPhone 8 Plus ndiwo mazita emidziyo mitsva
Dzazvino Kubuda Ratidza Kuratidzika Kwemeso ID